Non womluki Bag
Non womluki D-Sika Bag
Ingxowa yeT-Shirt engalukanga
Isingxobo seTote Bag esingalukwanga
Elaminethiweyo Non womluki Tote Bag
Laser elaminethiweyo Non womluki Bag
I-Ultrasonic engekho ephothiweyo iTote
Umqhaphu weLaphu leCotton
Umqhaphu weLaphu leCotton ngeGusset esezantsi
Umqhaphu weCanvas Canstring Bag
Umqhaphu weThayile yeCanvas Mesh
Umqhaphu Canvas Tote kunye Gusset
Umqhaphu weLinvas Zipper Bag
I-Plain Cotton Canvas Tote Bag
Ingxowa yeVelcro Thermal
Ingxowa ye-Zipper Thermal
Ingxowa enamavili yokuthenga
Zithini iziphumo zeengxowa zokhuselo lokusingqongileyo ezingalukanga kwishishini lezorhwebo?
Ixesha Post: Apr-28-2021
Zithini iziphumo zeengxowa zokhuselo lokusingqongileyo ezingalukanga kwishishini lezorhwebo? Bag ephothiweyo ukhuselo lokusingqongileyo luhlobo ezingxoweni ibhegi ezenziwe ngelaphu non-ephothiweyo. Luhlobo lwenkcazo yefom yangaphandle kunye nokomeleza umfanekiso wonke wemveliso. Luhlobo o ...Funda ngokugqithisileyo »
Indlela yokwahlula Ebubanzini yengxowa yokwenza ngelaphu non-ephothiweyo?
Ixesha Post: Apr-27-2021
Indlela yokwahlula Ebubanzini yengxowa yokwenza ngelaphu non-ephothiweyo? Kwimveliso yeelaphu ezingalukanga, ngamanye amaxesha ubukhulu beelaphu ezingalukanga azilingani. Yintoni ingxaki? Oku kulandelayo kukuba uthethe ngezizathu ezinokubangela ubungakanani obungalinganiyo beelaphu ezingalukwanga phantsi ...Funda ngokugqithisileyo »
Izinto ezinokuthi ziqwalaselwe kubalo lwamaxabiso engxowa engalukwanga
Ixesha Post: Apr-26-2021
Izinto ezinokuthi ziqwalaselwe kubalo lwamaxabiso engxowa engalukwanga Zeziphi izinto ekufuneka ziqwalaselwe kubalo lwamaxabiso eengxowa ezingalukwanga? Ngoku zininzi iingxowa ezingalukwanga ezenziwe ngokwezifiso. Abavelisi abaninzi kunye neevenkile bafuna ukwenza ngokwezifiso iibhegi ezingalukanga, nokuba kukwazisa imveliso yabo ...Funda ngokugqithisileyo »
Izinto ezichaphazela ixabiso leengxowa ezingalukwanga
Izinto ezichaphazela ixabiso leengxowa ezingalukwanga Ixesha lokudalwa kweposi: Nge-02 kaNovemba, 2011 13:36 izimvo: 1 khangela: Igalelo le-165 Kwilizwe laseTshayina yanamhlanje, ngokunyuka komqondo wekhabhoni esezantsi, ibango leengxowa zokhuselo lokusingqongileyo liyanda. Ukuze ubambe isabelo sentengiso, indoda ...Funda ngokugqithisileyo »
Inani leebhegi ezingalukwanga lincinci, elonyusa iindleko!
Ixesha Post: Apr-24-2021
Inani leebhegi ezingalukwanga lincinci, elonyusa iindleko! Kule mihla, ukwenziwa kwemveliso kuyeyona ndlela iphambili kuzo zonke iindlela zobomi. Iingxowa ezingalukwanga nazo zibandakanyiwe. Nangona kunjalo, kubafunayo, ukwenziwa ngokwezifiso kunezibonelelo kunye nokungalunganga. Kutheni usitsho lonto? Zhdbag, njengepr ...Funda ngokugqithisileyo »
Kutheni ixabiso leyunithi yeebhegi ezincinci ezingalukwanga ziphakamile?
Ixesha Post: Apr-23-2021
Kutheni ixabiso leyunithi yeebhegi ezincinci ezingalukwanga ziphakamile? Abathengi abaninzi bayothuka bakufumanisa ukuba ikowuteshini yethu iphezulu kakhulu kunexabiso leyunithi yeebhegi ezingama-5000 ezingalukanga xa ndi-odola iibhegi ezingama-1000 ezingalukanga? Kukho umahluko omkhulu ngexabiso leyunithi yamashumi amawaka eengxowa, ke sicinga ...Funda ngokugqithisileyo »
Indlela yokuchonga umgangatho ilaphu ibhegi ukhuselo lokusingqongileyo non-ephothiweyo?
Ixesha Post: Apr-22-2021
Indlela yokuchonga umgangatho ilaphu ibhegi ukhuselo lokusingqongileyo non-ephothiweyo? Indlela yokuchonga ilaphu nonwoven? Kuqala kwinto zonke, kufuneka sazi ukuba izinto zeebhegi ezingalukanga ngokwendalo azilukwanga, zikwabizwa ngokuba aziluki. Kodwa ngokubanzi siyibiza ngokuba ayilukwanga. Kwimakethi yanamhlanje engalukwanga, ...Funda ngokugqithisileyo »
Uthini umahluko phakathi kwengxowa engalukwanga kunye nephepha?
Ixesha Post: Apr-21-2021
Uthini umahluko phakathi kwengxowa engalukwanga kunye nephepha? Sihlala sibona iindidi ezimbini zeengxowa, enye yelaphu ingalukwanga; Elinye liphepha. Amalaphu non ephothiweyo zingahlulwa zibe iingxowa non-ephothiweyo, iingxowa non-ephothiweyo, non-ephothiweyo iingxowa zokuthenga, njl Iphepha lungohlulwa lube kwiingxowa ezimhlophe eziphathekayo, impahla ...Funda ngokugqithisileyo »
Kukuphi okungcono kunengxowa yokuthenga engalukanga kunye nezinto zephepha?
Ixesha Post: Apr-20-2021
Kukuphi okungcono kunengxowa yokuthenga engalukanga kunye nezinto zephepha? 1, reusability iingxowa lokuthenga non-ephothiweyo. Uncedo lwengxowa yokuthenga engalukwanga kukuba inokusetyenziswa kwakhona amaxesha amaninzi. Ingxowa yephepha inokusetyenziswa kuphela, kwaye ixabiso lefektri liphezulu kunelo lokuthenga okungalukwanga b ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukuprinta njani amagama kwiingxowa ezingalukwanga?
Ixesha Post: Apr-19-2021
Indlela yokuprinta amagama kwiingxowa ezingalukwanga？ Ngoku abathengi abaninzi benza iibhegi ezingalukanga ngokushicilela inkampani yabo okanye ilogo yombutho kunye nombhalo. I-logo inokuprintwa kwiingxowa ezingalukwanga ngezi ndlela zilandelayo: 1. Ukuprintwa kwesikrini kwesilika Le yindlela eqhelekileyo yokuprinta, ixabiso liphakathi, ...Funda ngokugqithisileyo »
Indlela ukuphucula ubomi engxoweni ephothiweyo?
Ixesha Post: Apr-18-2021
Indlela ukuphucula ubomi engxoweni ephothiweyo? Kule mihla, kuluntu olungenalo ungcoliseko, iingxowa zokuthenga ezingalukwanga ziyathandwa endaweni yeengxowa zeplastiki ezingcolisa indalo. Nangona kunjalo, olu hlobo lweebhegi luhlukile kwezinye iibhegi zokuthenga ezithengiswa emarikeni, Ngokubanzi, ukuba ...Funda ngokugqithisileyo »
Luhlobo luni lwetekhnoloji ibhegi engalukwanga esetyenziselwa ijezi yekheshi?
Ixesha Post: Apr-17-2021
Luhlobo luni lwetekhnoloji ibhegi engalukwanga esetyenziselwa ijezi yekheshi? Ibhegi yengubo engalukwanga ihlala isetyenziselwa ukubamba ikheshi yecashmere. Elinye icala lilaphu elingalukwanga, elinye icala yi-PVC okanye zonke zizinto zokwenza izinto ezingalukwanga Kukho uhlobo lwengxowa ye-cashmere yejezi, eyi-gene ...Funda ngokugqithisileyo »
Chengdu zhihongda nonwoven ibhegi Co., Ltd.
Ifowuni: 0086 15184479681